Dagaalkii Fasaxa Fasaxa Fasaxa - Google Shopping vs. Amazon Product Ads in Q4 | Martech Zone
Dagaalkii Fasaxa Fasaxa Fasaxa - Google Shopping vs. Amazon Product Ads in Q4
Khamiista, Febraayo 21, 2013 Andrew Davis
Waxay leeyihiin "lacagtaada dhig meesha afkaagu yaalo." Hagaag, ereyga dariiqa, iyo malaha waddo kasta oo adduunka ah, waa in Google iyo Amazon ay yihiin kuwa lacagta kaa sameeya markay tahay tafaariiqda internetka. Google Shopping iyo Amazon Product Ads shaki la'aan waa laba ka mid ah kuwa ugu firfircoon, taraafikada-lacag bixinta isbarbardhiga makiinadaha dukaamaysiga (CSEs) ee jira. Laakiin qof walba waa ogyahay taas. Waxa ugu badan ee aan garanaynin waa heerarka dhulka hoostiisa ee kooxaha waaweyn ee CSE: Xogta cayriin. Xaqiiqooyinka kashifaya.
Waa kuwee CSE ee ugu waxqabadka badnaa Q4? Istaraatiijiyada CPC isbarbardhigaya Google Shopping iyo Amazon Product Xayeysiiska ku saleysan jaangooyooyin muhiim ah sida taraafikada, guud ahaan heerka beddelashada, iyo celceliska qiimaha gujinta (CPC). Bal aan eegno.
Ha ka nixin. Gawaarida Amazon kaliya kuma dhicin Q3. Dhab ahaantii, arrin ka soo horjeedda ayaa dhacday. Taraafikada Google Shopping aad ayey u sarreeysay oo taraafikada Amazon aad ayey uga yaraayeen. Google waxay u dirtay 144% taraafikada tafaariiqleyaasha intarneedka badan Amazon. Taasi waa in ka badan laba laab qadarka taraafikada. Tani waa horumar weyn oo Google u ah Q4 2011.
Q4 2012, Google waxay u dirtay 96% taraafikada ganacsatada ka badan inta ay sameeyeen Amazon. Maxaa farqiga lama filaanka ah u keenay? CSE-yada kale, sida Shopzilla iyo Shopping.com, ayaa helaya ogeysiiska baaxadda weyn ee Google waxayna bilaabeen inay ku xayeysiiyaan wax soo iibsiga. Ku guuleystaha taraafikada: Dukaameysiga Google.
Heerka Beddelka (CR)
Halkan waxaan ku aragnaa 2 isbeddello is khilaafsan. Laga soo bilaabo Q4 2011, Heerka beddelashada Google Shopping wuxuu si joogto ah hoos uga dhacay 3.1% ilaa 2.4% Q4 2012. Taasi waa hoos u dhac 22.35% ah hal sano. Dhinaca kale, waxaan leenahay Amazon, oo heerka beddelaadku uu si joogto ah uga kacay 1.8% Q4 2011 ilaa 2.8% Q4 2012. Taasi waa a 57.5% koror sanadkii.
Muxuu ku kala duwan yahay? Weligeed illaa iyo markii Google uu u beddelay qaab CSE ah oo lacag leh, waxaa caddaatay in dalabyada ganacsigu ay saameyn weyn ku yeesheen sida wanaagsan ee alaabada tafaariiqlayaashu u soo ifbaxayaan, sidaas awgeedna, heerarka beddelaadooda Ku guuleystaha heerka beddelka: Xayeysiiska Alaabada Amazon.
Celceliska Qiimaha Guji (CPC)
Qiimaha gujinta waa fikrad quruxsan oo ku cusub Google. Waxay kaliya si rasmi ah ugu wareegeen qaabka la bixiyay dhowr bilood ka hor Oktoobar, sidaas darteed waxaan arki karnaa illaa Q4 2011 - Q2 2012, Google ma laha celcelis ahaan CPC.
Si kastaba ha noqotee, markii CPC uu noqday udub dhexaad u ah dukaanka cusub ee Google ee laga iibsado Q3, wuxuu bilaabay inuu ka hooseeyo Amazon wuxuuna sii joogay Q4 oo dhan, isagoo ka soo wareegaya celceliska CPC ee $ 0.30 ilaa $ 0.31. Celceliska CPC ee Amazon dhab ahaantii xoogaa wuu kordhay sanadkii la soo dhaafay, wuxuu ka bilaabmay $ 0.33 Q4 2011 wuxuuna kordhay $ 0.41 Q4 2012. Waxa aan halkaan ku aragno ayaa ah in Google CPC celcelis ahaan uu ahaa 32.5% ka raqiisan Amazon ee Q4 2012. Guusha CPC: Dukaameysiga Google.
In kasta oo xaqiiqadu tahay inaanan xitaa eegin qiyaaso kale oo muhiim ah sida qiimaha iibka (COS), dakhliyada, iyo ka jawaab celinta mashiinka, Google Shopping wali waa halbowlaha halkan. Warbixinta oo dhameystiran (in lagu sii daayo Istaraatiijiyada CPC Blog Toddobaadka soo socda), Google wuxuu isku caddeeyay inuu yahay 'CSE' oo ah 'Q4' inkasta oo uu yahay mishiinka ugu da'da yar.
Tan maxay uga dhigan tahay tafaariiqleyda? Istaraatiijiyadaada xilliga dukaameysiga xilliga fasaxa, oo ay tahay inaad hadda isku diyaariso, waa inay diiradda saaraan qayb weyn oo ka mid ah Dukaameysiga Google maxaa yeelay waa tartan culus iyo lacag sameeye inta lagu jiro fasaxyada.
Andrew waa Agaasimaha Suuqgeynta Istaraatiijiyada CPC. Dabayaaqadii Sebtember 2010, Andrew wuxuu dhammeystiray qorista Buug-gacmeedka Isbarbar-dhigga Ganacsi ee ugu horreeya abid kaas oo bixiya aragti guud oo ku saabsan sida loo bilaabayo loona maareeyo is-barbardhigga wax ku oolka ah ee wax iibsiga. Maanta Andrew wuxuu waqtigiisa intiisa badan ku qaataa la-taliyeyaasha dhexdhexaadka ah iyo kuwa waaweyn ee internetka iyo wakaaladaha suuq-geynta internetka, iyo sidoo kale qorista iyo hagista Istaraatiijiyada CPC Blog.
Quintly: Raadinta Warbaahinta Bulshada iyo Qiimeynta
Febraayo 22, 2013 saacadu markay tahay 2: 40 AM
Xitaa haddii xayeysiisyada Dukaameysiga Google ay u muuqdaan kuwo kafiican oo indhahayga qabanaya, waxaan leeyahay koonto Amazon ah oo la aasaasay qiimaha guud ahaanna waa ka jaban yahay (9 jeer 10kiiba wixii aan soo iibsaday) .. 2 guji oo waxay ku jirtaa boostada.
Febraayo 22, 2013 saacadu markay tahay 11: 00 AM